APHRODITE GEED GEED: SHARAXAADDA KALA DUWAN IYO SAWIRKIISA, ASTAAMAHA BEERASHADA IYO SIFOOYINKA - BEERTA
Apple Tree oo leh magac caqli - Aphrodite
Waxaa macquul ah, xulashada magaca varietal ee tufaax this casriga ah ee bisaylkiisa ay ahayn oo aan ka jirin jimciyadaha ilaahiga Giriigga ah ee jacaylka.
Ama laga yaabo inay kiciyeyaashu dib u soo celiyaan khuraafaadka "apple of discord", laakiin hal waddo ama mid kale, tan iyo 1981 Waxay u muuqatay in ururinta Machadka Cilmi-baarista ee Fruit-ka ee hoos yimaada magaca cayrta Afrodity.
Sharaxaad ka mid ah kala duwan Aphrodite tufaax iyo sawirka midhihiisa - tan danbe.
Muddada noloshii firfircoonayd ee noocyo cusub ah caadi ahaan kama badna 300 sano. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, noocyo badan oo muddo dheer noolaa - Aporttusaale ahaan. Wuxuu horey u ahaa 900 sano Calvil Snow iyo in ka badan - 2000 sano.
Waddankayaga, xulashada noocyada kala duwan ayaa dhowaan la sameeyey - horraantii qarnigii 20aad. Sidaa daraadeed, geedo badan oo tufaax ah oo caadi ah oo ku yaal beerta ayaa sharaxaad ka bixinaya qoraalka "xulashada qaranka".
Apple Aphrodite - cusub miiska fasalka qaboobaha jiilaalka-adagkuwaas oo imtixaannada ka dhacay 25 sano gudahood Central Chernozem Gobolka iyo gobolka Lower Volga.
Abuuritaanka noocyo cusubi maaha mid dhammaad leh, khubarada ayaa si ulakac ah u shaqeynaya si ay u siiyaan dhirta cusub iyo tayada cusub ee naftaada u leh:
caabbinta xaaladaha jawiga cimilada ee gobolka (caabinta jiilaalka, adkeynta abaarta);
is-hortaagid cudurro gaar ah;
dardargelinta bislaanshaha miro;
yareynta shuruudaha diyaargarowga ee fruiting;
hagaajinta badeecadaha soo jiidashada ee miraha;
hagaajinta habka kiimikada ee saxarka;
beddelaya sifooyinka morphological iyada oo ujeedadu tahay daryeel wanaagsan.
Inta lagu jiro hawlaha taranta, kala duwanaanta tufaaxa Aphrodite waxay soo iibsadeen hiddo-wacyi cusub (Vf) kaas oo abuura geedka waxay u dhigantaa 5 marxaladood oo cudur fungal ah, burburiyay geedo tufaax ah, qolof. Sidaa darteed, mudnaanta noocyada cusub ee laga helay geedo ee pollen lacag la'aan ah ayaa la isku daray, inkasta oo loo baahan yahay sanado badan oo dadaal ah.
Waxa kale oo adkaysi u ah qolof leeyihiin noocyo: Gabadha Pepinchik, Uralets, Yubilyar, Stroyevsky iyo Rennet Chernenko.
Virtues of tufaax
Hardiness Winter ee qaybta Yurub ee Russia.
Baadi baahida loo qabo siyaabo dheeraad ah oo loo ilaaliyo geedka ka hor jiilaalka.
Resistance of nidaamka xididka si ay u dhowaanshaha dhulka dhulka.
Heer sare (278 c / ha).
Fruiting sanadlaha ah.
Xasaasiyad si aad u kabsato.
Midhaha tayada sare leh (ganacsiga iyo macaamiisha).
Kombiyuutarrada kiimikada ee ka shaqeeya ka hortagga iyo horumarinta jirka bini'aadamka.
Suurtogalnimada kaydinta muddada dheer ee miraha (ilaa Janaayo 0 dhibcood) iyo gaadiidka.
Dhibaatooyinka muddada 25ka sano ee noocyada tijaabada ah lama aqoonsan.
Sidoo kale wax-soosaarkooda sare waa noocyo kala duwan: Gala, Antey, Welsey, Quinty iyo Bratchud.
Noocyo sharaxaad ah Aphrodite
Sida geedo badan oo tufaax ah, Aphrodite - noocyo kala duwan oo is-kiniin ah. Wixii buuxa oo badan oo fruiting wuxuu u baahan yahay pollinator wadaag ah.
Doorasho ku habboon ee pollinators for noocyada this waa yar yahay: Stroyevskoe (kala duwan jiilaalka dambe ee taranta) iyo Kurnakovskoe (noocyo kala duwan, diiwaanka Gobolka tan iyo 2002).
Iyo dambe, ee geedi socodka pollination lafteedu filanayo isdhexgalka ee Aphrodite.
Si kastaba ha noqotee, labada geedo wadaag ah waxay daboolaan shuruudaha ugu muhiimsan ee rimanka:
waxay leeyihiin marxalado ubaxyo ah iyo midabyo oo leh Aphrodite;
waxay tilmaamayaan qaabka qaboobaha ee tufaaxa;
adkaysi u yeeshay qolof;
waxay leeyihiin nolol iyo wax soo saarka.
Caawimaad: Maadaama mashiinnada ugu muhiimsan ee manka ay yihiin shinni, iyo baaxada duulimaadkoodu aanu ka badnayn 2 km, geedkii rimayntu waa inuu ku yaala aaggaas.
Aphrodite wuxuu u taagan yahay horaantii noocyada jiilaalka, laakiin "awooda ilaalinta" ee midhihiisa kama badna 3 bilood. Baaxadda buuxda ee tufaaxa (macaamiisha), waxay timaaddaa uun goosashada ka dib (2-3 toddobaad kadib), taas oo dhacda qeybta labaad ee Sebtembar.
Shaqooyinka taranka ee dhirta ayaa muujinaya laga bilaabo 4-5 sano. Da'da wax soo saarka ah waxay siineysaa 150 kg oo miro ah oo ka yimaada asliga ah. Shuruudaha nolosha ee xadka guud ee geedaha tufaaxa - 50-60 sano.
Heerkani waxa uu tilmaamayaa waxsoosaarka sare ee sanadlaha ah, iyada oo aan la siin muddooyinka dhaqaale.
Hardiness jiilaalka ee geedka tufaaxan ayaa lagu muujiyay dulqaad ilaa kala duwanaanshaha heerkulka jiilaalka Ruushka, oo leh tuubooyin iyo dhaxan.
Inta lagu jiro kala duwan ee taranta ceymiska ka cayayaan saameynta waxyeelo ee cudurada fangas.
Apple Aphrodite oo ah nooc kala duwan oo miis ah ayaa la wada baabbi'iyey oo cusub waxaana lagu baari karaa miro la qalajiyey, casiir, waxsoosaar, xajiyaasha, saxaraha, marmalade, khudradda cagaaran.
Interest: Isticmaalka joogtada ah ee tufaaxu wuxuu kor u qaadaa difaac, wuxuu hagaajiyaa metabolismka iyo nidaamka wadnaha.
Faa'iidooyinka gaarka ah ee bani-aadmigu waxay ku faani karaan noocyo kala duwan: Orlinka, horjoogaha Orlovsky, jiilaalka Moscow, Aromatic iyo Young Physicians.
Geedo badan oo dhakhso u koraya ayaa leh mid aan aad u dheereyn. Muuqaal: laamaha qalfoofka waxaa lagu sameeyaa xagasha qummanaanta.
Caleemaha dhalinyarada leh cirifka jilicsan ee cirifka leh waxayna leeyihiin midab buni ah. Jilif ee geed weyni waa cagaaran-bunni ah, siman.
Ka hor inta ubax on laanta, burooyinkeeda yar yar cadaadiyey in caleemaha la arki karaa. Ubaxa wuxuu ka muuqan doonaa kuwa ka weyn, qaabka dalladeynta inflorescences leh 4-6 ubax kasta.
In ubbooyinku, ubaxa leeyihiin midab casaan cirro leh, isagoo furay, waxay noqdaan xataa xitaa. Cabbirta ubaxa waa dhexdhexaad, qaabkuna wuxuu u egyahay qoryaha, oo ah bartamaha kuwaas oo ah foorno dabacsan iyo antheres 10-20 stamens.
Leaves ayaa wada muuqata ubaxyada, laakiin waxay sabab u yihiin koritaanka gaaban waxay u oggolaadaan ubax inay ku taliyaan taajkii muddada ubax ka hor inta aan la samaynin ugxansii.
Ugu dambeyntii, markii la sameeyay, caleemuhu waxay gaareen heer dhexdhexaad ah oo leh qaab muuqaal ah. Midabadu waxay leeyihiin cagaar mug leh oo leh jilcigo huruud ah. Qalabka laf-dhabarka ee dhinaca dambe waa mid yar, midabkiisu waa qallayl, sifuhu wuxuu u dhigmaa.
Tufaaxyada waxaa lagu kala gartaa saameynta qurxinta: diirka cagaaran-jaalaha ah ayaa badanaa lagu daboolaa caarada jilicsan ee jilicsan, taasoo noqonaysa xitaa iftiin leh wakhtiga bisaylka macaamiisha.
Miro ayaa yar, ilaa 140 garaam, oo leh maqaarka midabka leh ee madow iyo sheeniis saliid leh. Sanduuqyada caleemaha ayaa xiran, abuurka furan, cabbirka dhexdhexaad ah, midab madow.
Tilmaamo kala duwan - Wareegyo casaan ah oo qaabdhismeedka cufnaanta cad. Aphrodite Apple waa caan ku ah casiirka iyo dhadhan macaan.
Caawimaad: Dunida waxaa jira 10,000 oo nooc oo tufaax ah. Waxaa jira 300 oo ka mid ah dalkeenna, 8% ka mid ah waa noocyo da 'ah oo la dhaxlo. Noocyo cusub ayaa diiradda saaraya muuqaalada gobolka.
Dhab ahaan, kala duwanaanshahan ma sheeganayo xaalado korniin ah oo kordhay. Qeybta qorraxda, ee laga ilaaliyo dabaylaha xooggan, waa wax aad u qanacsan.
Waxa ugu muhiimsan waa Deriska beerta lama duubo, waxay ahayd meeshii ay ku kori lahaydhaa dhulka lama degin. Sidaa daraadeed, ma ahan lagama maarmaan in la gooyo geedka tufaaxa ee hooseeya ee biyuhu uusan dhalaalin muddo dheer ka dib baraf ama roob. Inkasta oo biyaha dhulka ku yaala ay yihiin kuwo si joogto ah u dulqaadanaya.
Ma aha inaad isticmaasho meel ay tufaax kale ku koraan, iyo beeritaanka xiga ee guriga waa wax aan macquul ahayn: Dabayl, qoryaha, qashin caleen.
Waa macquul in la abuuro noocyo kala duwan oo geedo tufaax ah oo ku yaal goobta: dhowr xagaag, dhowr jeer xilliga dayrta iyo jiilaalka kala duwan. Markaas qoyska oo dhan xagaaga iyo jiilaalka waxay ku jiri doonaan fitamiino.
Waa muhiim: Dhirta yaryar waa in lagu dhex beeray meel fog oo ka mid ah kuwii hore, sidaas darteed nidaamka xidid jeexjeexan ee dambe, intertwining, ma dulmiyo sapling.
Baaxada wax soo saarka mustaqbalka ee tooska ah waxay ku xiran tahay doorashada saxda ah ee geedo iyo ilaalinta saxda ah ee farsamada beerashada.
iibso geedo kaliya oo ka yimid alaab-qeybiyeyaal la aamini karo oo haysta ruqsadaha iyo shahaadooyinka alaabta;
Ka taxadar bacda qalab beerto (sida caadiga ah - waxay noqon doontaa peat qoyan), waa in aan la qalajin, caleemo saarnayn;
iska ilaali geedo "ku badalasho" deriska iyo dad aan aqoon: waxaad keeni kartaa cudur ama cayayaanka beertaada;
loogu talagalay warshad farsamo oo lagu kalsoonaan karo laba iyo saddex sano.
Waa muhiim: Rootiyada la qalajiyey iyo caleemaha jabay waa in la gooyaa; ka baxo iyada oo aan waxyeello kelyaha, si taxadar leh uga saar; ka gooyay dhinaca sare ee madaxa 10 cm, tegaayo 6-7 kelyaha oo wax soo saar.
Habka beeritaanka waa in la qorsheeyaa guga (dabayaaqadii Abriil) ama dayrta (kama dambeyn 20-ka Oktoobar). Haddii ay jirto dib u dhac aan loo baahnayn in laga beerto seedling, waa farsamo ah prikopat jiilaalka, iyo dhirta guga. Wixii beeritaanka noocyo tufaax ah oo kala duwan ee noocaan ah waxay ku habboon yihiin sifooyin kala duwan.
Waa muhiim: Pit ka yar seedling la goostay toddobaad ka hor beerashada qorsheysan.
Heerka godadka - 1 m (dhexroor) 0.7 m (qoto dheer);
geeddi-socodka beerashada Bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu dabaqayaa;
waxay isku dhafaan dhul dabacsan oo u eg tuulmo;
faafinayaan xididada rootstock ee tuulada;
si taxadar leh u qabsanaya bartamaha ceelka, dantu waxay bixisaa taageero laba sano oo geed ah oo daciif ah;
oo xididdadiisuna isagay ka hooseeyeen, oo qallajisay.
qoorta xididka ka baxsan 5 cm ka sarreeya heerka ciidda;
seedling ayaa si badan u waraabiyey ilaa ciidda si cad loo riixo (baaldi 5);
peat (5 cm) ama humus pristvolny goobada mulch;
waraabinta waxaa lagu soo celiyaa wakhti wakhti toddobaad ah.
Nidaamka daryeelka wuxuu ka kooban yahay hawlo xilliyeed oo khasab ah:
loosinta iyo waraabinta;
ka hortagga waxyeello bayooloji ah.
Waraabinta waxaa la sameeyaa 5 jeer xilli ciyaareed, xagaaga kulul - marar badan.
Huuri dhulka hoostiisa geedka tufaaxa siyaabo badan, laakiin had iyo jeer kaliya fiidkii:
ku shubaya wareegyada isbitaallada ku dhow (3 baaldiyo kasta);
rusheynta (qoyan oo laga nadiifiyo boodhka iyo cayayaanka);
iyada oo loo marayo qalabka of grooves agagaarka jir;
waraabka faleebo (meelaha aagga).
Waa muhiim: Ka waraabinta tayada weyn waxay u baahan tahay in la bilaabo dabacsanaanta, iyadoo la adeegsanayo kabaha ama boombalooyinka ujeedadaas, si ay carrada u dhajiyaan meelo badan 30-40 cm.
Gooyo marwalba waxay ka soo baxdaa xilliyada dhirta ugu weyn ee nolosha geedka waxayna raacdaa hadafyo dhowr ah:
manjooyin si loo kordhiyo wax-soosaarka;
waayo, rar la soo guro;
si aad isugu diyaariso jiilaalka.
Waxaa suurtogal ah in la maareeyo goosashada mustaqbalka, kicinta fruiting, inta lagu jiro muddada ubax: Si arrintan loo sameeyo, dhuubo ugxan, adigoo ka jaraya ubaxda bartamaha xirmooyinka ama ka tago 1-2 ugxan-yar oo ku jira xirmooyinka.
Bacriminta Apple waxaa lagu sameeyaa inta lagu jiro nolosheeda wax soo saar leh waxaana lagu maamulaa wejiyada ugu muhiimsan xilliyada.
Organic iyo Macdanta (fosfat iyo potash) ayaa lagu soo bandhigaa qaab ama dareeraha si sax ah, sida ku cad qorshaha gaarka ah. Wixii kala duwan ee kala duwan, habkani ma aha mid ka duwan habka guud si quudinta xididada geedaha tufaaxa.
Ka hortagga waxyeelada nafleyda ee laga yaabo in laga helo fungal fungal waxaa lagu daraa noocyo kala duwan xilligii doorashada. Laga soo bilaabo cayayaanka xayawaanku waxay ilaalin karaan jirridda dhirta (geedaha yar yar - laabta, limeey).
Laakiin walaaca ugu weyn ee bannaanka u ah ilaalinta jirridda geedka tufaaxa ah ee looga soo horjeedo weerarada jiirka (jiirarka iyo cayayaanka). Geedka waxaa laga ilaaliyaa iyaga oo gooyaa jirridda laamood oo la yidhaahdo laanta dabka, xajmiga ama daadinta (dareeraha).
Interest: Si wax ku ool ah uga difaacdo jiirka jilicsan ee pristvolnogo wareega qoyan leh balka galka leh.
Sidee loo badbaadiyaa dalagga?
Xilliga jiilaalka hore ee tufaaxa waxaa lagu kaydin karaa ilaa 3 bilood qaboojiyaha.
Laakiin, haddii uu jiro dhulka hoose iyo beergooyska waa weyn, ka dibna saar kaydintu waa lagama maarmaan marka loo eego xeerarka qaarkood:
diyaariso xargaha oo aan lahayn daldaloolo (raaci burush, qalalan);
ku dabool warqad nadiif ah;
Ha ku shubin midhaha mid ka mid ah midka, laakiin si taxadar leh uga soo shub baaldi ay ku urursan yihiin, ku dhuftay sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah ee hoose ee sanduuqa oo gacanta ku haya;
Ilodanimada deyrtu waxay noqon doontaa kan ugu yar uguna badbaado ilaalinta tufaaxa;
Waa muhiim: Tufaaxa loogu talagalay in lagu kaydiyo jirida.
waa inay ku istaagaan hooska ama qolka qabow dhawr maalmood ka hor intaadan u dhaqaaqin Maqsinka si ay u qaboojiyaan oo kala soocaan;
sanduuqda midhaha ayaa la dhigayaa hal lakabka; haddii laba - aad u baahan tahay inaad dib u dhejisid lakabyada warqad ama ku shub bustayaasha qalalan;
kaydinta dheeriga ah, tufaaxa waxaa lagu duuduubay warqad nadiif ah;
heerkulka la doorbido ee kaydinta waa 0-3 digrii Celsius, qoyaanku waa 80-90%;
Waa inaadan gelin qaybta Maqsin, halkaasoo xididada loo kaydiyo, sidaa darteed miraha looma lumiyo dhadhanka asalka ah iyo carafka.
Noocyada tufaaxan ee soo socda ayaa ah kuwo si wanaagsan loo ilaaliyo: Xusuusta Michurin, Korah, Kutuzovets, Ekranny iyo Granny Smith.
Caawimaad: Xilliga jiilaalka waxaa jira hab lagu keydiyo tufaaxa dhulka. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku jiraan bacaha balaastigga ee 2 kg waxayna ku aaseen dhulka si qoto dheer oo ah 30 cm. Ka kor ku xejin xayawaan iyo caleenta qallalan. Waxay macno u tahay in ay calaamad u dhigto si ay u helaan fasaxyada jiilaalka waqtiga saxda ah.
Dooro geedo leh xidido waaweyn oo caafimaad leh.
Fasalka Aphrodite waxay si gaar ah ufudud u tahay, si fiican, haddii qorraxda ay iftiimin doonto maalinta oo dhan
Qaababka faafinta ee taajka ah waxay u baahan tahay meeleyn lagu fekeray geedkii beerta.
Si loo yareeyo goosashada, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso dhererka dhirta adigoo jarjaraya, iyada oo aan xaddidin koritaanka laamaha horjoogsanaya.
Iyadoo koritaanka geed, ma aha oo kaliya jir, laakiin sidoo kale laamaha hoose waa in laga ilaaliyo jiirka.